20 sano in diiradda la saaro dhalooyinka caagga ah
Dongguan Fukang caaga Products Co., Ltd aasaasay 1999, ku yaal Guangdong, Shiinaha iyo daboolay 9000 mitir murabac. Waxaan ku takhasusay soo saarista iyo dhoofinta noocyada kala duwan ee dhalooyinka PET iyo HDPE. kuwaas oo inta badan loo isticmaalo farmashiyaha iyo warshadaha cuntada, dhammaan qalabyadu waa darajo cunto waxayna dhaafeen shahaadooyinka FDA, EU 、 LFGB, alaabtayaduna aad ayey caan uga yihiin Australia, Brazil, Canada, United States, India, Newsland, Mexico, Philippine iwm
Dhalooyinka daawada ee loo yaqaan 'Hdpe' iyo 'PET' waxaa loo isticmaalaa xirxirida alaabada daryeelka caafimaadka, nafaqada, kaabista cayaaraha, kaabsoosha, kaniiniyada iyo kaniiniyada, iwm.
Dhalooyinka cuntada ee PET waxaa loo isticmaalaa inay ku jiraan noocyo kala duwan oo cunto ah, sida nacnaca, buskudka, shukulaatada, lowska, subagga looska iyo Xawaayadaha, iwm.
Dhalooyinkayaga caagga ah sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa ujeedo gaar ah, sida saacadaha wax lagu duubo, funaanad, aalado ay ku ciyaaraan, hadiyado, dahabka, qalabka xafiisyada iyo qalabka elektaroonigga ah.
Waxaan sidoo kale bixinnaa adeegga OEM, sida sameynta wasakhaha cusub iyo astaanta daabacaadda oo ah naqshadeynta macaamiisha
Waxaan si kal iyo laab ah u soo dhawaynaynaa inaad nalashaqayso
Qaad saamiga bilaashka ah
Waxaan ku siin karnaa dhalooyin bilaash ah si aad u tijaabiso tayada.
Ms. Macy yan
Dooro dalkaaga ama gobolkaaga